Na MasterCard njem eji Apple Pay | Esi m mac
MasterCard na-enye ndị njem ụgbọ njem n'efu na njem ọha na London maka ndị ọrụ Apple Pay
Imagine chere gaa London gburugburu n'efu Site n'ụgbọ njem ọhaneze? Ọ bụrụ na nke a emee naanị United Kingdom, ị nwere ike ịbanye na Metro, ụgbọ oloko, ụgbọ ala London na DLR n'efu maka ụbọchị Mọnde anọ na-esote, gụnyere Monday a anyị gafere. Nkwalite MasterCard ha kpọrọ ya "Mbọchị Mọnụ Ọsọ Ọsọ" àmà site na 2Nọvemba 3 rue Disemba 14 na ọ bụ naanị na ọdabara niile ọnwa na-ada n'etiti oge a.
N'ime oge nkwalite ahụ, ihe ị ga - eme bụ ịkwụ ụgwọ maka ụgbọ oloko, ụgbọ ala ma ọ bụ DLR Apple Lezienụ iji MasterCard kaadị gị. Mgbe ebu ụzọ tinye ego na kaadị gị, nke a ga-abụ laghachiri laghachi gị n'ime ụbọchị 28. N'ụzọ ezi uche dị na nke a nwere oke, nke a bụkwa £ 27,90 kwa onye na-ejide MasterCard.
Iji ruo eruo maka onyinye anyị na-enye, ị ga-enyocha ngwaọrụ ahụ site na Apple Pay na onye na-agụ kaadị 'odo' na mbido na njedebe nke njem ọ bụla nke London Underground, Docklands Light Railway, London Overground, TfL Rail, Emirates Air Line , na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọrụ ụgbọ okporo ígwè National (ebe ndị na-agụ kaadị nọ), na London (ma ọ bụ ihe ọ bụla jikọrọ ndị a) na ebe dị n'etiti mgbe achọrọ. Na London bọs na trams naanị ka a ga-akwado ya na mbido njem ha.
Usoro na ọnọdụ nke onyinye nkwado nwere ike ịbụ chọta ebe a. Nkwalite ahụ dị mma ịmalite ndị na-azụ ahịa na ịdị mfe site n'iji nke Apple Ṅaa. M na-ajụkwa gị otu ajụjụ ahụ, Maka mgbe na Spain?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » MasterCard na-enye ndị njem ụgbọ njem n'efu na njem ọha na London maka ndị ọrụ Apple Pay
The nwere nke na agba nke ọhụrụ Apple TV billboards
Ha na-atụle ike n’etiti iPad Pro na MacBook Pro na-ebupụ vidiyo vidiyo 4k